पेट घटाउन रोटी खाने कि भात ? विश्व चर्चित डाइटिसियनको यस्तो जवाफ – tshorolpa
Home/स्वास्थ्य/पेट घटाउन रोटी खाने कि भात ? विश्व चर्चित डाइटिसियनको यस्तो जवाफ
पेट घटाउन रोटी खाने कि भात ? विश्व चर्चित डाइटिसियनको यस्तो जवाफ
News ५ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०७:००
यदि तपाइँलाई मोटो पनले सताएको छ वा भुँडी लागेर चिन्तित हुनुहनुन्छ भने पक्कै पनि भुँडी घटाउने उपाय खोजिरहनु भएको होला ।
के भात खाँदा भुँडी बढ्छ ?
कतिपयले भुँडी घटाउन भन्दै रोटी खाने गर्छन् भने कसैले भातले भुँडी नबढ्ने भन्दै भात खान्छन् । कतिलाई त अझ भात नखाइ पेट नै नभरिने समस्या हुन्छ । धेरै मानिसलाई रोटी खाँदा भुँडी घट्छ भन्ने लागेपनि यसबारेमा मानिसहरुलाई स्पष्ट जानकारी छैन । विश्वका चर्चित डाइटिसियनले एक टोकरी ३० ग्राम चामल र ३० ग्राम रोटीले शरीरमा उत्तिकै क्यालोरी दिने भएका कारण यसमा अलमल नपर्न सुझाव दिएका छन् ।
हालै प्रकाशित एक रिपोर्टमा विश्व चर्चित डाइटिसियनहरुले भात र रोटीले उत्तिकै क्यालोरी दिने भएका कारण भात र रोटीले फरक नपार्ने बताएका छन् ।
तर पेटको दृष्टिले रोटीमा फाइबरको मात्रा बढी हुने हुँदा त्यसले पाचनमा सजिलो हुने उनीहरुको भनाइ छ । भातमा भने फाइबरको मात्र हुँदै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ । भात खाँदा छिटो भोक लाग्ने र रोटी खाँदा केही समय सम्म भोक नलाग्ने भएका कारण रोटी खानु उचित मानिएको हो । जसलाई भात खाने बानी परेको छ त्यस्ताका लागि भने भारतमा फाइबरको मात्रा हुने चिजहरु मिसाएर पकाउनु पर्ने डाइटिसियनको सुझाव छ । चामल र गहुँमा चिल्लो पदार्थको मात्रा भने बराबर हुने डाइटिसियनको भनाइ छ ।
थपिए १ हजार ३५६ नयाँ कोरोना संक्रमित
६ आश्विन २०७७, मंगलवार १६:३६
गुगल गरेर उपचार खोज्दा रोगकै फन्दामा : भर्चुअल उपचार टिप्स कति भरभर्दो?
९ भाद्र २०७५, शनिबार ०९:४८
१४९७ जना नयाँ संक्रमित थपिए ,४५७ जना डिस्चार्ज
अझै पनि कोरोनाको सन्त्रास सकियको छैन
५ पुष २०७७, आईतवार ०७:४६